कोरोना भाइरस सङ्क्रमण: नेपालमा यसरीे भयो पुष्टि, मुख्य लक्ष्यण | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य कोरोना भाइरस सङ्क्रमण: नेपालमा यसरीे भयो पुष्टि, मुख्य लक्ष्यण
on: १४ माघ २०७६, मंगलवार २१:०४ In: स्वास्थ्यTags: No Comments
त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आगन्तुकको परीक्षणका लागि चौविसैघण्टा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । “कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन तर पनि सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएकालाई भने विशेष निगरानी गरिएको छ ।” श्रेष्ठले भने । सामान्य ज्वरो आउँदैमा डराइडराइ अस्पताल जानु नपर्ने उनले बताए । सङ्क्रमण दर बढन्सक्ने आशङ्कामा निगरानी बढाइएको र बढ्ने अवस्था देखिएमा त्यसको सामना गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस विभिन्न सात खालमा छ । सन् २००३ मा चाइनामा सार्स कोरोना देखा परेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा मर्स कोरोना देखियो । अहिलेको ३१ डिसेम्बरमा चीनको हुवान शहरबाट नोभेल कोरोना भाइरस देखिएको हो । यसलाई ‘2019,N-cov’नाम दिइएको छ ।
हुवान प्राप्तबाट आएका एक व्यक्ति रुघाखोकी र ज्वरो देखिएपछि अन्य बिरामी झैँ आफैँ ओपिडीमा सामान्य तवरले उपचारमा आएका थिए । उनको नमूना परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हङ्कङ्स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । उक्त परीक्षणमा उनीमा नोभेल कोरोना भाइरस पुष्टि भएको शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका चिकित्सक डा. विवेकलालले जानकारी दिए ।
उनी अहिले घर फर्किसकेका छन् । उनीसँगको सम्पर्कमा रहेका अरुमा भने भाइरस नदेखिएको डा. विवेकलालले आज पत्रकारलाई जानकारी दिए । उनी नेपालमा गत पुस १६ गते चिकित्सकको सम्पर्कमा आएका थिए । पुस २८ गते भर्ना भएकोमा माघ ९ गते उक्त भाइरस रहेको पुष्टि भएको थियो । अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका चारमध्ये तीन जनामा भने भाइरस नरहेको पाइएको छ । शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रयोगशाला हेर्ने डा. रुना झाले अहिले कुनै पनि व्यक्ति परीक्षणको क्रममा नरहेको जानकारी गराए ।
अर्का चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोलाले मौसमी रुघाखोकी जस्तै रहेको बताउँदै दुबैको रोक्ने तरिका पनि उस्तैउस्तै हो भने । नियमित हात धुने, बिरामीको नजिक नजाने, गएमा सुरक्षा अपनाएर जाने, माक्स लगाउने सङ्क्रमित, व्यक्तिलाई छोएमा तत्कालै साबुन पानीले हात धुनेलगायतका उपाए अपनाउन उहाँले सबैलाई सुझाव दिएको छ ।
सामान्य रुघाखोकी लागेका पनि टेकु अस्पतालमा आउने क्रम बढेको भन्दै उनले सङ्क्रमित क्षेत्रका मानिसलाई मात्रै विशेष निगरानी जरुरी रहेको तर अन्य मानिसले सामान्य रुपमा उपचार गराउँदा हुने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर दाहालले समयमै स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।